लेखिका ज्वाला संग्रोलाले “म बोल्छु” भन्दै खो’लिन बिनोद रानाभाट बचा’उ अभियानमा उठेको रकम बारे पूरा रह’स्य…पूरा पढ्नु’होस् । – पुरा पढ्नुहोस्……
लेखिका ज्वाला संग्रोलाले “म बोल्छु” भन्दै खो’लिन बिनोद रानाभाट बचा’उ अभियानमा उठेको रकम बारे पूरा रह’स्य…पूरा पढ्नु’होस् ।
समाजसेवी लेखिका ज्वाला संग्रोलाले खोलिन बिनोद रानाभाट बचाउ अभियानमा उठेको रकम बारे पूरा रहस्य…पूरा पढ्नुहोस् । उहाले फेसवूक मार्फत स्टाटस लेख्दै भन्नुहुन्छ।
यो पोस्ट समय भए शीरदेखि तिरसम्म पढेर प्रतिक्रिया दिनुहोला:
#बिनोद रानाभाट बचाऊ अभियानमा उठेको १ करोड़ २१ लाख रकम पुरानो समितिको खातामा राखेको बेला चलाउन नमिल्ने कानुनी ब्यबधान आएसँगै त्यो रकम चाँडोभन्दा चाँडो चलाउन मिल्ने बनाउनको लागि हामी यो अभियानमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा जोडिएका सबैजनाले छलफल गर्यौं।
अन्तत यो रकमलाई नयाँ समिति बनाएर त्यसै नवगठित समितिको खातामा जम्मा गरिएको कुरा नेपालबाट समितिमा आबद्द महानुभावहरुले जानकारी दिनु भएको छ। यो खुसीको कुरा हो। तर यो खुसीसँगै हामीमाथी थप चुनौति र ज़िम्मेवारी थपिएको छ ! त्यो पैसा कस्तो कस्तो पीडितलाई बितरण गर्ने भन्नेबारे अब ढिला नगरी सोच्ने बेला आएको छ। यसो भन्दै गर्दा हामीले वास्तविक पीड़ित र बिरामीको शारिरीक अवस्था र आर्थिक हैसियत बुझेर मात्र काम अगाडि बढाउनु जरुरी छ।
खातामा पैसा छ भन्दैमा निको भएर घर फर्किसकेका बिरामी, आर्थिक अवस्था ठीकै भएका, घरपरिवारका सदस्य काम गरि खान सक्ने भएका , सानो बिराम तर पैसाको लागि त्यस्लाई ठूलै देखाएर दुख पोख्न आउने अनि डाक्टरले माया मारेर घर फर्काएका बिरामीका आफन्तहरुले कृपया सम्पर्क नगरिदिनुहोस्।
किनकी त्यसो गर्दा बास्तविक पीड़ितसामु सहयोग पुग्न गारो हुन्छ। हाम्रो उदेश्य भनेकै यो पैसालाई निश्पक्ष ढंगबाट कुनै बिबाद रहित तरिकाले सहि ठाउँमा सदुपयोग गरौँ भन्ने नै हो! अर्कोतिर , हामीले यो बेलामा कसैको नक्कली आँसुमा तैरिएर भावनामा डुब्दै ल म तिमीलाई बिनोदको पैसा यति गराईदिन्छु र उति गराईदिन्छु भनेर आस्वसन दिने काम पनि गर्नु हुन्न र नाताबाद कृपाबाद तिर लम्केर यो मेरो चिनजानको हो यस्लाई यति पैसा तुरन्त निकाल भनेर समितिलाई धरपकड़ गरेर तर्साएर पैसा आफ्नो तिर हुल्ने पक्षपाती कामपनि हरगिज गर्नु हुन्न ।
यदि साँच्चै पीड़ित हो भने त्यो पीडितको latest हस्पिटल रिपोर्ट र पारिवारिक स्थितिको डाटासहित आउनु पर्यो। नत्र ख़ाली फ़ोटो पठाएको भरमा मात्र रकम बाँड्ने काम गरिने छैन! यदि वास्तवमै पीडित हो भने उस्ले जरुर सहयोग पाउनै पर्छ ! यस्को लागि पीडितका आफन्तहरुले एउटा निबेदन लेखेर हस्पिटलको रिपोर्ट समितिमा बुझाउनु भएको खण्डमा लिने र दिने दुबै पक्षलाई सजिलो र न्यायसंगत हुन्छ भन्ने मेरो बुझाई छ।
अर्को महत्वपूर्ण कुरो के भने यो अभियान चलाउँदै गर्दा बिनोद बिना पैसा नेपाल पुग्छन् भन्ने न त कतारको राजदुताबासलाई थाहा थियो न त , कन्सुलरलाई थाहा थियो , न त अभियन्तालाई नै..! त्यतिबेला कतार राजदुताबासबाटै ८२ लाख नेपाली रुपैया बुझाए मात्र सजाय भुक्तानी भै बिनोद नेपाल फर्कन सक्ने भन्ने बकाईदा बिज्ञप्ति जारी गरिएको थियो।
यसै अनुरुप एउटा कलिलो ठिटो बिदेशमै सडिनु नपरोस् भनेर संसार भरिका महान नेपाली मनहरुले आफूले सक्दो सहयोग गरिदिनु भयो र तीन हप्तामै सोचेभन्दा धेरै रकम जम्मा भो। तर अन्त्यमा बिनोद भाई बिना पैसा नेपाल आउनु भो..! ब्लड मनिको केशमा बिना पैसा सफ़ाई पाएर देश फर्किन सफल बिनोद भाईको भाग्य दुर्लभ र बलियै मान्नुपर्छ!
तर भाई फर्किए लगत्तै उनको नाममा उठेको रकम भनेजसरी छिटो छरितो तरिकले टुँगो लगाउन सकिएन । बीचमा चाडबाड आयो कानुनी झण्झट आयो ! त्यो हाम्रा सहयोगी मनहरुले बुझ्नु भएको छ। तर अब पैसा चल्न मिल्ने भैसकेको अवस्था लगभग आईसकेको भन्ने मैले बुझेकी छु। अब एक मिनेट पनि ढिलो नगरी समितिले उत्तरदायी र ज़िम्मेवार भएर काम गरोस्।
ब्याज पनि एक एक सुको हिसाब गरियोस्! पैसा खातामा राखेर ब्याजबाट सहयोग गरौँ भन्ने सर्त कसैले पनि नराख्नुहोला किनकी यो पैसालाई जतिसक्दो चाँडो टुँगो लगाउनु जरुरी छ। अनि यो अभियान माथी सकारात्मक तरिकाले प्रस्न गर्ने र जिज्ञासा राख्ने छुट सबैलाई छ किनकी यो ५० डिग्रीको घामसँग भोकै र तिर्खै जुधेर कमाएको गरिबहरुकै पसिनाको नासो हो। यसमाथी खेलबाड नहोस् भनी जनताले बिरोध पनि गर्न पाउनु पर्छ , प्रस्न सोध्न पनि पाउनु पर्छ। कसैले गाली देला , कसैले मायाले सोध्ला , कसैले चरित्र हत्या गर्ने उदेश्यले सोध्ला, कसैले सीधा प्रस्न राख्ला, त्यो जनताको आफ्नो आफ्नो क्षमता ,सोचाई र परिपक्वताको प्रतिबिम्ब हो।
कसैसँग हामी अभियन्ताले प्रतिक्रियाबादी भएर जानु जरुरी छैन।￼ हामीले इमानदार , पारदर्शी र ज़िम्मेवार भएर काम गर्ने बेला हो￼ यो , गाली गर्ने र आलोचना गर्नेलाई ओठे जबाफ दिने बेला हैन।चाहेर वा नचाहेर काम ढिलो भएकै हो￼￼, यस्लाई समितिले स्वीकार्नै पर्छ! भोलि रकम ब्यवस्थापन राम्रोसँग भएन भने जनताले समिति चिन्दैन।￼जनताले प्रश्न गर्ने इशा, ज्वाला , अर्जुन , शिशिर , कृष्ण ￼आदिलाई हो जस्को साथमा न पैसा छ न त आधिकारिकता नै ! तसर्थ समितिले डाईनामिक भएर काम गरोस्। लुते ल्याङ्रे पाराले अब चल्दैन..!
Prevगौतम बुद्ध रँगशालामा एक्कासी आज राति के भयो यस्तो ! धुर्मुश तना’वमा- हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)
Nextआज ओरालो लाग्यो विदेशी मूद्राको भाउ, साउदी, कतार दुबई,मलेसिया लगायतका मुलुकको मुद्राको दरभाउ .. हेर्नुहोस
बिद्यालयको खानेपानी टयांकीमा बिष : २९ बिद्यार्थी बिरामी, ४ गम्भिर ..(.भिडियो सहित हेर्नुहोस)
‘कुटुमा कुटु’ पछि मेलिना राईको अर्को उत्कृष्ट कौडा गित रिलिज (भिडियो सहित)